Umyalezo jikelele we-Shenzhen Wonderfulgold Clothing Co., Ltd.
Le yiWonderfulgold (WG) ––– ishishini lijolise kwisinxibo sakwa-OEM, i-ODM okanye i-OBM. Senza olona hlobo lushushu oluhlangabezana neenkwenkwezi ezinamagama amakhulu, sikuphathele ezona mpahla zintle zemfashini kwihlabathi liphela. Njengomthengi wethu, uphakathi, singenza yonke into ukwenzela wena. Ukusukela ekunikezeleni ngokufika okutsha rhoqo ngexesha lonyaka, sinqwenela ukukunika iijezi ezintle ezinithiweyo.
Eyasungulwa ngo-2006 e-Shenzhen, eChina, kukho zonke iintlobo zeesampulu kunye nezixhobo zokuvelisa ukuhlangabezana neemfuno zeendlela ezahlukeneyo, Umzekelo: 3GG, 5GG, 7GG, 9GG, 12GG, 14GG, 16GG. Silungiselela ukuthatha iimpahla ezinithiweyo ezikufanelayo. Okwangoku, mhlawumbi ukhathazeka ngobungakanani, umgangatho, ixabiso, ukuhanjiswa kunye nasemva kwenkonzo, khetha iWG, awukhathazeki nto.
Samkela iqhekeza eli-1 le-MOQ, ngomgangatho olungileyo, amaxabiso afikelelekayo kunye nokuhanjiswa kweJIT. Okwangoku, abasebenzi bethu abaqeqeshiweyo baya kukugcina uposwe kuyo yonke inkqubo. Sihlala sihlaziywa ngemixholo emitsha kunye nezitayile eziqhubekayo ezithandwayo. Bhrawuza iwebhusayithi yethu kukhetho olubanzi lweempahla ezinithiweyo ngalo lonke ixesha lonyaka laMadoda, amaLadies kunye naBantwana '. Sicinga ukuba unokubanjiswa ngomnye wabo.